Sevashambadziri, tinowanzo funga nezve data revatengi uye hunhu senzvimbo dzakamira senge zera, kodhi yepositi, uye muridzi wemba. Nekudaro, isu tinorasikirwa nepo rukova rwunoitika rwezviitiko zvinoitika kutenderedza hupenyu hwevatengi. Zviitiko zviri nyore sekushanduka kwemamiriro ekunze zvinogona kuchinja maitiro emutengi uye maitiro ekutenga. Kana sinou iri munzira, semuenzaniso, tingave tichitenga mataya matsva kana kuti yechando patinofamba munzira.
Kazhinji, email vanopa sevhisi vanoita mutengi mutoro wekuronga eemail zvinokonzeresa vachishandisa yavo application programming interface. Zvakanaka kuona Yesmail Unokonzeresa Ungwaru yakapihwa, ichiita kuti zvive nyore kwazvo kune avhareji bhizinesi kusanganisa zviitiko zvinotangisa mushandirapamwe musanganiswa yavo yekutengesa.